Xisaabinta ereyga internetka - Tiro ereyada | Abuurista khadka tooska ah
Xisaabinta ereyga internetka - Tiro Ereyada
Qalabka soo socda ayaa kuu oggolaanaya tiri tirada ereyada ee qoraalka kujira si dhakhso leh oo fudud. Kaliya waa inaad ku qortaa qoraalka sanduuqa soo socda oo aad ku dhufataa badhanka si aad u tiriso ereyada:
Diiwaan gelin looma baahna. Tiri tirooyinka ereyada ee qoraalka kujira dhowr ilbiriqsi mahadsanidiin ereyga miisaanka internetka.
Sidii ay caawin lahayd, waxaan sidoo kale leenahay a miiska calaamadaha internetka.
1 Sidee loo adeegsadaa ereyga miiska?
2 Maxaa la sameeyaa haddii erayga ereyga qadka ah uusan ii shaqeynaynin?
Sidee loo adeegsadaa ereyga miiska?
Howlgalka ee ereyga miiska in aan kuu soo bandhigeyno waa mid aad u fudud: waxaad si fudud ku qasbi kartaa inaad nuqul ka sameyso oo aad ku dhajiso qoraalka sanduuqa kore, oo aad gujiso badhanka tirinta.
Isla markiiba, farriin ayaa la soo muuqan doonta tirada wadarta ereyada kuwaas oo maqaalkaaga ama qoraalka aad gashay uu ka kooban yahay. Waxa ugu fiican ayaa ah taas erey xaddidan ma leh, sidaa darteed waad ku dari kartaa waxyaabaha aad rabto inta aad rabto.
Haddii aad rabto talo, waxaan kugula talineynaa inaad nuqul ka sameysatid oo aad ku dhajiso qoraalka amarro aad kuugu raaxeysan doona: Ctrl + C (nuqul qoraalka) iyo Ctrl+V (si loogu dhejiyo qoraalka qalabkeena).
Maxaa la sameeyaa haddii erayga ereyga qadka ah uusan ii shaqeynaynin?
Haddii ay dhacdo in qalabku u shaqeyn waayo sidii la rabay, waxaan haysannaa beddelaado kala duwan. Laakiin midka aan ugu jecel nahay waa adeegsiga Microsoft Word, halkaas oo aad ka arki karto salka hoose, ama salka hoose ee qalabka, tirada ereyada ee dukumintigaaga qoraalka ahi ka kooban yahay.
Si kastaba ha noqotee, waxaan hubnaa inaad boggan ku heli doontid wax kasta oo aad ugu baahan tahay tiri ereyada ku jira dukumintigaaga, sidaa darteed waxaan si xoogan kuugu dhiirigalinaynaa inaad tijaabiso awooddeeda.
Tani waxay si gaar ah waxtar u leedahay haddii aad u baahan tahay inaad gaartid erey xaddidan oo loogu talagalay warqad, imtixaan ku meel gaar ah, imtixaan Ingiriis ah, ama hawlo kale oo u baahan in la oggolaado ugu yaraan ereyo. Thanks to our tool, waxaad ku heli kartaa ilbiriqsiyo gudahood.